Barakacayaal ku hoyan jiray afaafka hore ee baarlamaanka oo loo qaaday Nakuru – The Voice of Northeastern Kenya
Barakacayaal ku hoyan jiray afaafka hore ee baarlamaanka oo loo qaaday Nakuru
In ka badan 35 qof oo barakacayaal gudaha ah oo dhoobnaa afaafka hore ee xarunta aqalka baarlamaanka ee magaalada tan Nairobi, ayaa habeenimadii xalay loo qaaday magaalada Nakuru.
Dadkaan ayaa ka mid ahaa qaxooti horay guryahooda uga bara kacay rabshadihii ka dhashay doorashadii guud ee dalka ka dhacday dabayaaqadii sanadkii 2007-di, rabshadahaas oo socday ilaa horaantii sanadkii 2008-di.
Richard Kimungui oo ah gudoomiyaha kooxdaasi barakacayaasha ah ayaa sheegay in dad sheegay in ay yihiin saraakiil dowladda ka tirsan ay loona soo diray in ay caawiyaan dadkaasi ay xalay u yimaadeen kadibna ay ka kaxeeyeen 35 qof oo ka mid ah 87 ruux oo qaxooti ah oo ku sugnaa agagaarka dhismaha baarlamaanka.
Mr Kimungui yaa intaas ku daray in markii barakacayaasha la kaxeynayay loo sheegay in la geyn doono saldhig boolis oo lagu xaqiijinayo in ay yihiin muwaadiniin, si ay u sahlanaato in dhibaatadooda wax laga qabto.
Hase ahaatee gawaaridii lagu kaxeeyay ayaan geynin saldhig boolis, taas badalkeedana waxa ay u jaheysteen dhinaca magaalada Nakuru, sida uu maanta war baahinta u sheegay gudoomiyaha barakacayaashaasi.
Ma jiro wax war ah oo ay masuuliyiinta laamaha amaanka kasoo saareen arrintaan ay cabashada ka muujinayaan dadka barakacayaasha ah oo dib uga soo laabtay dalka Uganda, isla markaana doonayay in ay dowladda wax u qabato.
← Rwanda oo saraakiil Faransiis ah ku eedeysay xasuuqii 1994-ti
Raila Odinga oo bari booqanaya Isiolo →